Ny angovo hamokarana alimo iray taonina ho an'ny fanamboarana dia 5% fotsiny amin'ny fitaovana hafa, mitahiry famoahana CO2 efa ho 10 taonina-tombony fanampiny manatsara ny isa LEEDS ho an'ny tetikasa iray.
Ny velaran'ny fonosana alimo alimika alimina dia voatsabo amin'ny alàlan'ny fitsaboana anti-oxidation, izay mety hahatonga ny vokatra firaka aliminioma hanana fiasan'ny fanoherana harafesina avo.
Na inona na inona karazana tontolo iainana, ny mpiambina alimo aluminium dia tsy ho harafesina, halazo, vovoka, hianjera ary ny loko dia hamirapiratra sy maharitra. Mandritra izany fotoana izany, safidy loko manankarena hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Post Tube Tube 50 * 50mm na manitsy miorina amin'ny fangatahan'ny mpanjifa Vita ny etona Mifono vovoka
Glass Panel Voahombo, voahosotra, manjavozavo Loko fitaratra Mazava, mangatsiaka na miloko
hahavony Namboarina Tendrombohitra Tendrombohitra ambony, sisiny na fotony
Top Cap 90 * 32mm Kianja Handrail Help Rail 1½ "SS Rail; 2" Wood Rail
Safidy loko Black, White na namboarina miorina amin'ny kaody loko mpanjifa
Hatevin'ny fitaratra 1/2 "(min.) Panel fitaratra
Ny vidin'ny rafitra fitaratra vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina anao dia ho faritana amin'ny halehiben'ny velarana ilainao, ary koa ireo safidy farany nofidinao.
Aorian'ny fankatoavana ny sarin'ny fivarotana, ny rafitry ny lalamby vita amin'ny alim-baravarankely dia mandeha amin'ny famokarana ao amin'ny orinasa any Foshan, Sina. Izahay dia manana fitaovana fanamboarana hazo, vy ary fitaratra ka afaka manamboatra ny sakan'ny tohatra sy ny arofaninao rehetra izahay.
Ny ifantohan'ny fizotrantsika dia ny fanaovana ny fizotry ny fametrahana ho tsotra araka izay azo atao. Ny lalantsara dia tapaka amin'ny halavany ilainao. Afaka nanao izany marimarina kokoa isika satria mifehy ny fizotran'ny injeniera ho an'ny rafitra iray manontolo, ary mahatonga ny fizotran'ny fametrahana ho asa tsotra.
Raha vantany vao noforonina ny rafitry ny lalamby, halefanay hoso-doko sy fametrahana torolàlana momba ny fametrahana an-tserasera izany. Ny vokatray dia mora fametrahana DIY ary ny ankamaroan'ny tsy mila welding. Ny ankamaroan'ny tetikasa dia afaka vita ao anatin'ny andro vitsivitsy monja.
Teo aloha: Terrace Aluminium Frameless U Channel Base Glass Railing
Manaraka: Fitsangatsanganana vy vita amin'ny nentim-paharazana ho an'ny lavarangana na tohatra